एन कुँवर काठमाडौं, ४ जेठ
मैले मेरो घर ‘ठोक्सिला’ हो भन्दा ती युवती एक छिन मज्जाले हाँसिन् । म पनि उनको अनुहारमा हेरेर ट्वाल्ल परें ।
भर्खरै परिचय भएकाले मैले फिसिक्क हाँसेर उनको हाँसोमा आफूलाई मिलाएँ ।
मोटरसाइकल सभिर्सिङ गर्न दिएका कारण म गोपीकृष्ण पुलबाट नेपाल यातायात चढेर बालुवाटारसम्म हिँडेको थिए । मेरो अघिको दायाँ झ्यालपट्टिको सिटमा एकजना २० वर्ष जतिकी ती युवती बसेकी थिइन् । उनको छेउको सिट बिलकुल खाली थियो । अरू सिटमा पनि केही युवती एउटा ‘कोटा’ खाली राखेर बसेका देखिन्थे । तीमध्ये उनीचाहिँ निकै राम्री थिइन् ।
साउनको खरबारीजस्तो सर्लक्क परेको बाक्लाे कपाल, ठूला–ठूला आँखा, लालुपाते ओठ, पुष्ट छाती र मन्द प्याजी रंगको पाइन्टमा टाइट टिसर्ट । अहो ! साँच्चै कमाल !
हजार जिब्रा भएका शेष नाग, चतुर्मुखधारी ब्रह्मा र तेत्तीस कोटी देवताले उनको रूपको प्रशंसा गर्न नसक्लान् । म त एउटा सामान्य मान्छे । म उनको रुप हेरेर मख्खिएँ, लट्ठिएँ र लोभिएँ पनि ।
हल्का अप्ठ्यारो लागे पनि उनी छउकै सिटमा बसें । उनले आफ्नो टाउको झ्यालतिर मोडिन् । मानौं, म आएर उनलाई डिस्टर्ब भयो । ‘केटीहरू यस्तै हुन्छन्,’ मैले सोचें, ‘सायद भाउ खोजेकी होली ।’ फेरि म त्यति फरवार्ड कहाँ छु र ?
उनी घरीघरी मलाई नियाल्दै थिइन् । मैले पनि उनले हेरेको बेला अर्कैतिर मुन्टो बटारें । ‘म पनि त्यति सस्तो कहाँ हो र’ भन्ने खालको आडम्बर त ममा पनि थियो । त्यही बालुवाटारसम्म १५ मिनेटमा के नै कुरा होला र भन्ने लाग्यो । बोलेर पनि खासै फाइदा देखेको थिइनँ । फेरि धेरै केटा यस्तो केसमा फाइदालाई अलि बढी प्राथमिकतामा राख्छन् । म त्यस्तै थिएँ ।
मजस्ता तत्काल रिजल्ट खोज्ने मान्छेले खासै गर्ने पनि केही होइन फेरि । परीक्षा दिन एक वर्ष पढ्नुपर्छ । परीक्षा दिएपछि त नतिजा एक वर्ष वा कम्तीमा ६ महिना कुर्नुपर्छ । यो त मान्छेको मुद्दा हो । त्यति चाँडै रिजल्ट खोज्नु मूर्खता थियो । हिजो आज पो महसुस हुन्छ ।
नारायण गोपाल चोकमा पुगेर हामी सवार गाडी जाममा पर्यो । बाबुराम भट्टराईको सरकार । भएभरको शक्ति सडक विस्तारमा लगाउँदै थियो । सडक विस्तारका क्रममा एउटा डाेजरले अगाडि कसैकाे घर ढाल्ने प्रयास गर्दै थियाे । अगाडि मान्छे निक भेला भएका थिए । स्थानीय यसकाे प्रतिराेधमा सडकमा उत्रेका रहेछन् । सडक खुल्न ढिलाइ हुने कुरा बुझियो । ओरेन्जबल चकलेट मागिरहेको बच्चाले क्याटबरी पाएझैं मन फुरुंग भयो । एउटै सिटमा कतिबेलासम्म नबोल्ने ? अब चाँडै मौनताको पर्खाल ढल्नेवाला छ, मनमनै साेचें ।
उनी मसँग बोल्न खोजिरहेको पत्तो मैले पाइसकेको थिएँ । मेरो त कुरै नगरौं । के निहुँ पाउँ र कनिका पोक्याउँ । सबै त नभनौं, प्रायः केटा यस्तै हुन्छन् ।
मैले पनि त्यो दिन मधुरो नीलो रंगको कोट लगाएको थिएँ, त्यसभित्र सेतो सर्ट अनि भर्खरै आइरन गरेको नीलै रंगको पाइन्ट । अघिल्लो दिन हेयर ड्रेसरकाेमा गएर कपाल मिलाएको थिएँ । मेरो मन त भन्दै थियो, सायद उनी पनि मलाई हेरेर नतमस्तक छिन् । आफू नराम्रै भए पनि प्रायः मानिसको मनोविज्ञानमा यस्ता अनुभूति हुन्छन् भन्ने मलाई लाग्छ । उनले पहिला बोलाउलिन् भनेर ‘पूरा नहुने आस’मा थिएँ म ।
लामो सुस्केरा हाल्दै उनी बोलिन्, मतिर नहेरीकन, ‘बेकार गाडीमै बसिराको, हिँडेर गाको भए पुगिसकिन्थ्यो ।’
मौकाको फाइदा उठाउने प्रयासमा मैले पनि मिलाइदिए स्वर, ‘हो त, मैले पनि त्यसै गरेको भए हुन्थ्यो, कहाँ जानुपर्ने होला ?’
उनले जवाफ त फर्काइन्, मतिर हेर्दै नहेरी, ‘बालुवाटार ।’
ओहो ! कति भाउ खोज्छन् यी केटीहरू । किन भाउ खोज्या भनेर सोध्यो भने नापिएको उत्तर दिन्छन्, ‘आलु हो र भाउ खोज्न ?’ त्यही पनि अब कुरा गर्ने ट्र्याक खुलेझैं महसुस भयो । मनमा उछालिएको उकुसमुकुस शान्त हुँदै थियो । मैले भनें, ‘म पनि बालुवाटार जाने त हो नि !'
कति न विदेशमै भेटिएजस्तो ।
‘मैले के गर्नु त,’ भनेजस्तो गरी उनले मेरो कुराको वास्ता गरिन् । मानौं, कालीमाटीको तरकारी र दिनदिनै अकासिरहेको सुनको भाउ ।
‘तपाईंलाई मैले यसअघि नै कतै देखेजस्तो लाग्यो,’ मैले बाउबाजेको पालाको फरम्याट अपनाएँ । त्यसपछि ती मृगनयनी गाजलु आँखा मेरो चेहेरामाथि डुले । ती आँखा मेरा आँखासँग आमनेसामने भए । अहो ! कस्तो अनुभूति । मभित्र कुनै प्रकारको ज्वालामुखी फुट्नेवाला छ । मानौं, म आगोको लप्कालाई लामो समयदेखि एकोहोरो हेरिरहेको छु । म नर्भस भएँ ।
‘कहाँ ?’ उनले सोधिन् ।
त्यतिको उमेरका युवती पक्का कलेज पढ्ने हुनुपर्छ भन्ने अनुमान काटें । ‘एक्टिभ कलेजमा भाको प्रोग्राममा ।’ मैले टारें ।
कस्तो संयोग ! उनकी साथी प्रभा एक्टिभ कलेजमै पढ्दिरहिछन् । ६ महिनाअघि भएको वेलकम प्रोग्राममा साथीसँग उनी पनि एक्टिभ कलेजमा गएकी रहिछिन् ।
आफूले अनुमानमा भनेको कुरा मिलेको देख्दा मैले आफूलाई ‘स्मार्ट’ सम्झिएँ ।
बेलाबखत बहिनीले व्यंग्य गर्थिन्, ‘आफैंले आफैंलाई स्मार्ट ठान्ने कोही छ भने त्यहो हो, हाम्रो दादा ।’
यतिबेला बहिनीले थाहा पाएकी भए बल्ल दादाको स्मार्टनेस थाहा पाउँथिन् । म मख्ख परें । आखिरमा ‘अँध्यारोमा हानेको झटारो’ले झरेको थियो आँप त ।
कुराकानी सुरु भयो । उनले आफ्नो नाम जेसिका शर्मा बताइन् । निकै फरवार्ड थिइन् । उनले सोधिन्, ‘घरचाहिँ कहाँ हो तपाईंको ?’ मैले जवाफ दिएँ, ‘उदयपुरको ठोक्सिला ।’
त्यो पातलो ओठमा बाक्लो र बोल्ड गरी लगाइएको लिपस्टिक फारिने गरी उनी हाँसिन् । कति मीठो, चोरेर लुकाइहालौंजस्तो ! हाँस्दा मिलेका दन्तपंक्ति देखिए, कति मोहक र लोभलाग्दो । उनको हाँसोमा साँच्चै विशेष आकर्षण थियो, मेरो दिललाई तान्ने खालको । रूखमाथिको फल ठेट्नाबाट चुडिँदा गुरुत्त्वाकर्षणका कारण भुइँमा खसेजस्तै म उनैमा खस्दै थिएँ ।
उनको हाँसोमा घुलित चुम्बकीय शक्तिले म उनैतिर उनिदै गएँ । मेरो दाँत पनि मिलेकै थिए । मैले पनि दाँत देखाएर फिसिक्क हाँसिदिएँ ।
उनले अर्को प्रश्न गरिन्, ‘हैन, कस्तो खालको नाम हो यो ?’
हाम्रो संवाद अरुले खासै सुनेका थिएनन् । सुन्नेले पनि खासै वास्ता गरेजस्तो लागेको थिएन ।
मैले स्पष्ट पार्न खोजें, ‘रामपुर ठोक्सिला भनेको उदयपुरको पूर्वी भागमा पर्ने एउटा ठूलो, पुरानो र ऐतिहासिक विशेषता बोकेको गाविस हो । प्राचीनकालमा त्यस गाउँमा बसोबास गर्ने मानिसहरू त्यहीँ रहेका शिला अर्थात् ढुंगालाई ठोकेर अर्थात् कुँदेर विभिन्न आकारका मूर्ति तथा ढुंगाका सामग्री बनाएर बेच्थे अनि आफ्नो जीवनयापन चलाउँथ रे । त्यसैले ठाउँको नाम नै ठोक्सिला रहेको भन्ने सुनेको छु ।’
वर्णन धेरै हुन्छ जस्तो लागेर म रोकिएँ ।
उनले दुवै ओठले दाँत छोपिन् । त्यसपछि अरु कुरा भए । जाम पनि खुल्यो । बस अगाडि बढ्यो । त्यतिबेलासम्म बसमा अटुन्जेलसम्म यात्रु कोचिएका थिए, सासै रोकिने गरी । बालुवाटार पुगुन्जेलसम्म उनीसँग निकै कुरा भए । उनी शिक्षिका रहिछिन्, चावहिलकाे एउटा स्कुलमा पढाउने ।
अहिलेका बच्चा ‘उम्रिँदैका तीन पात’ हुन्छन् । अर्कातिर निजी विद्यालयका मिस र विद्यार्थीको उमेरमा खासै अन्तर पाइन छाड्यो । तसर्थ, विद्यार्थीहरू सिधै उनीहरूलाई पट्याउने योजना बुन्न थाल्छन् ।
त्यति राम्री मिसलाई देखेर इन्जोय गरेनन् भने ती आधुनिक बच्चा कसरी होलान् ? मनमनै सोचें ।
बालुवाटारमा ओर्लिने बेला भइसकेको रहेछ । म त उनीप्रति नतमस्तक भइसकेछु । ‘हेल्लो मिस्टर,’ उनले झकझकाइन् । हतार–हतार उनलाई बाटो छाडिदिएँ । ‘तपाईं पनि यही ओर्लने भन्या हैन ?’
म पनि कस्तो बुद्धु । ‘हो त ।’ म अघि लागें । उनले मलाई सँगै बसेर कफी खाने प्रस्ताव गरिन् ।
नजिकैको एउटा होटलमा गयौं ।
उनले सोधिन्, ‘के लिनुहुन्छ ?’
मैले मेनु मागें । वेटरले मेनु कार्ड ल्याइदिए । यसो हेरें, विदेशी खानाहरू मात्र देखें । निकै बेर आँखा घुमाई घुमाई हेरें । त्यसै पनि हामी अधिकांश नेपाली मेनु हेर्छौं । अन्तिममा त्यही मःम कि चाउमिन माग्छौं । मैले पनि त्यसै गरें । दुई कप मिल्क कफी र दुई प्लेट मःम ।
मलाई मःम र चाउमिन दुवै त्यति मन पर्दैन । तर, जेसिकाको अति नै प्रिय रहेछ ।
‘माथि बसौं है,’ होटेलको माथिल्लो फ्लोरतिर इसारा गर्दै उनले अनुरोध गरिन् ।
मभित्र आश्चर्यका पहाड उठ्न थालिसकेका थिए । लाग्दै थियो, अब केही समयपछि त्यसबाट ज्वालामुखी निस्कन्छ ।
मैले गर्नुपर्ने प्रस्ताव एउटी सुन्दरी युवतीले गर्दै छे । म मख्खिएँ, ‘आजको राशिफल त बबालै रैछ ।’
हामी रेस्टुराँको माथिल्लो फ्लोरमा गयौं, जहाँ एउटा अँध्यारो कोठा थियो । कोठा निकै सुगन्धित थियो । त्यहाँ एउटा डेकुरेटेड डबल बेड थियो । छेउमा एउटा टेबल थियो । उनले बत्ती बालिन् । नजिकैको टेबललाई बेडको छेउसम्म दुवैजना बसेर मःम र कफी खानेगरी मिलाइन् । मानौं, उनी त्यस ठाउँसँग पहिलेदेखि नै परिचित छिन् ।
‘कस्तो लागिरहेको छ ?’ उनले सोधिन् । म त्यसबखत वातावरण र उनको अद्भुत क्रियाकलापले लाटो भइसकेको थिए । अघिसम्मको मेरो कन्फिडेन्स गायब भइसकेको थियो ।
‘ठीकै,’ मैले जवाफ फर्काएँ, त्यो पनि मधुर स्वरमा ।
अचानक उनले मलाई वाइन खाने प्रस्ताव गरिन् । म अचम्ममा परें । ‘म त कहिले खान्नँ त,’ मैले जवाफ दिएँ ।
‘अहिलेको जमानामा पनि यस्तो कुरा गर्ने हो ?’ उनले प्रश्न गरिन् ।
निकै फोर्स गरिन् ।
‘ल ठीकै छ, म हार्ड ड्रिंक्स लिन्नँ । त्यसैले एउटा बियरचाहिँ खान्छु । तिमी वाइन मगाऊ’ मैले उनको प्रस्तावलाई सहजीकरण गरिदिएँ ।
वेटरले एक एकवटा वाइन र बियर ल्याएर टेबलमा राखिदिए ।
म दोस्रोपटक बियर खाँदै थिएँ । दुवैजना एउटै बेडमा बसेर पिइयो । उनले वाइनलाई बियरमा मिसाएर ‘कोकटेल’ समेत बनाएर पिइन् ।
मैले के काममा आएको र कहाँ हिँडेको भन्ने कुरा बिर्सिसकेको थिएँ । मोटरसाइकलको काम सकेर ग्यारेजवालाले फोन गरेछ । फोन साइलेन्टमा थियो । त्यो पनि थाहा पाइनछु ।
अचानक उनले मेरो हात समातिन् । त्यसपछि आफूतिर तानिन् । नशाले लट्ठिएकी सुन्दरी युवती र नशालु वातावरण । साँच्चै कमाल । बादलमाथि उडेजस्तै महसुस भयो । मैले धर्तीलाई निहुरिएर हेरिरहेको थिएँ । त्यहाँबाट चाइनाको ग्रेट वाल र नेपालको माउन्ट एभेरेस्ट प्रस्ट देखें । म बादलसँग लुकामारी खेल्दै थिएँ । त्यो क्रममा दिनले कालो रूप लिइसकेछ । लुकामारीको क्रममा कतिखेर म धर्तीमा खसें, पत्तो पाइनँ ।
अहो ! आजको रात बबालै भयो । कस्तो गहिरो निन्द्रा परेछ । म ब्युझिएँ । बिहानको ८ बजिसकेको थियो । खाना बनाएर अफिस जान मलाई पर्याप्त समय थिएन ।
ब्युँझिनेबित्तिकै जेसिकालाई यताउती हेरें । उनी थिइनन् । अनि बेलुका पिएको बियरको ह्याङ पनि थिएन । यसो हेरें, म बालुवाटारको होटलमा पनि थिइनँ । यताउति हेर्दै जिल्ल परें । ‘धारामा पानी आएको छ है भाइ,’ घरबेटी आन्टीले जानकारी गराइन् । काठमाडौंको धारामा पानी आउनु केटाकेटीलाई दसैं आउनुजस्तै हो । म हतार–हतार भाँडा लिएर धारातिर दगुरें ।
प्रकाशित मिति: शनिबार, जेठ ४, २०७६, ०६:४९:००
डा. सन्दुक रुइतको जीवनी अब नेपालीमा
नेपाल आइडल सिजन थ्री : संगीतमय बन्याे पाेखरा